GeekColor: skin, ခြုံ & Decals ။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ» #BeDIFFERENT Customize - GeekColor.com
အိုင်ပက် Pro ကို 12.9 "(2018)
အိုင်ပက် Pro ကို 11 "(2018)
အိုင်ပက် 9.7 "(2018)
အိုင်ပက် Pro ကို 12.9 "ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 2
အိုင်ပက် Pro ကို 12.9 "ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 1
အိုင်ပက် Pro ကို 10.5 "
အိုင်ပက် Pro ကို 9.7 "
Microsoft က Surface က
MacBook Pro နှင့် 13 (2018, Touch ကိုဘား)
MacBook Air ကို 13 "(2018)
MacBook Pro နှင့် 15 "(2016, Touch ကိုဘား)
MacBook Pro နှင့် 13 "(2016, Touch ကိုဘား)
MacBook Pro နှင့် 13 "(2016, Retina)
MacBook Pro နှင့် 15 "(2012, Retina)
MacBook Pro နှင့် 13 "(2012, Retina)
MacBook Air ကို 13 "
MacBook Air ကို 11 "
MacBook Pro နှင့် 15 "(2008)
MacBook Pro နှင့် 13 "(2008)
ကို Magic Mouse ကို
ကို Magic Mouse ကို 2
မှော် Keyboard ကို
Microsoft က Surface ကစာအုပ်213.5 "
Razer Blade ကို Stealth 12.5 "(Late 2016)
HP က် Spectre Pro ကို x360 G2
Dell က Inspiron 15 7000
Acer မှ Predator Helios 300 15.6 "
universal Laptop ကို
Apple က Chargers
iPod Touch ကို
Xiaomi ကနောက်ထပ် Mi Power Bank မှ
အရည်အသွေး 3M ဗီနိုင်း။ အကြွင်းအကျန် & ပူဖောင်းမပါဘဲ။ ခံနိုင်ရည်.
လေဆာဖြတ်: ပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်။ အတွက်💚နှင့်ဖွဲ့ စပိန်.
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း သို့မဟုတ်ကနေရှေးခယျြ အရောင်များ & texture ထောင်ပေါင်းများစွာ၏.
ပြည့်စုံသော ပစ္စည်းများ။ လွယ်ကူသော installation ။ နှင့်2နှစ်အာမခံ.
အရေခွံသင်၏ကိရိယာများအားလုံးအားကာကွယ်ရန်နှင့် personalize ဖို့အပေါ့ပါးဆုံး, အလွယ်ကူဆုံးအများစုရောင်စုံလမ်းရှိပါတယ်
ပရီမီယံမော်တော်ကားတန်းသွန်းဗီနိုင်း, မြို့ဘတ်စ်ကား၏မော်တော်ယာဉ်များနှင့်နှစ်ဖက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုတူညီသောပစ္စည်းကနေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဤသည်ပစ္စည်းပစ္စယကြာ!
သူတို့ကသူတို့ကိုစူပါပေါ့ပါးစေသည်ဖြစ်သောရုံ5ပါးလွှာ Mil (သို့မဟုတ်တစ်ခုလက်မ 0.005 ၏ငါးထောင်), တိုင်းတာ!
သင်သည်သင်၏အရေပြားကိုငြီးငွေ့ get သို့မဟုတ်အသစ်တဦးတည်းလိုပါကရုံကိုချွတ်လက်သည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကော်မဆို goo သို့မဟုတ်ကြွင်းသောစွန့်ခွာမည်မဟုတ်။
သင်သည်သင်၏ကားတစ်စီးပေါ်မှာဘမ်ပါစတစ်ကာထားနိုင်လျှင်, သင်ကအသားအရေကို install နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရေခွံလည်းလေထုပူဖောင်းကိုကာကွယ်တားဆီးတဲ့ Channel ကော်ရှိသည်။
GeekColor ကနေတိုင်းအသားအရေစပိန် (ဥရောပ) တွင်ဒီမှာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ Toledo တွင်တည်ရှိသည်။
အားလုံး dock, cable နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုအရေပြားအလုပ်မှာ
.25mm သည်းခံစိတ်အတွင်း - အရေခွံဿုံအသီးအသီး device ကို fit မှဖြတ်နေကြသည်။ ဒါကအားလုံးဆိပ်ကမ်းများ, ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပုံမှန်အားဖြင့်သုံးနိုငျဆိုလိုသည်။
သငျသညျ Bland ရှာဖွေနေသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်ခြစ်ဖုံးလွှမ်း, ဒါမှမဟုတ်သင်ကအသားအရေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ခြားနားချက်မြင်ခံစားရရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား?
iPhone ကို Customize
GeekColor နှင့်အတူသင့်ရဲ့ iPhone ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ပေးခြင်းအပြင်, သင်ကဆွဲထုတ်လိုက်တယ်သည့်အခါရေတံခွန်ကိုရှောင်ရှားသည်၎င်း၏ချုပ်ကိုင်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
for: ရရှိနိုင် iPhone ကို XS မက်စ်, XS, XR, X / 8 / 8 Plus အား /7/7Plus အား / 6S / 6S Plus အား /6/6Plus အား / 5S / SE / 5C /5/ 4S / 4
Samsung က Customize
အဆိုပါ Samsung ရဲ့ Galaxy လက်ဗွေရာနှင့်အတူဖြည့်ဖို့သံလိုက်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေခွံနှင့်အတူသငျသညျအစဉျအမွဲသူတို့ကိုမေ့လျော့ကြလိမ့်မည်။
for: ရရှိနိုင် က Galaxy S9 Plus အား / S9 /9/ 8 မှတ်ချက် / 8 / S8 Plus အား / S7 / S7 Edge / S7 မှတ်ချက် /7/ S5 Edge Plus အား / S4 Edge / S6 / S6 / A6 / A5 Plus အားမှတ်ချက် /9မှတ်ချက် / 8 FE မှတ်ချက်မှတ်ချက် / A7 / A6 Plus အား / A6 / J8 / J7 Duo / J6 / J4 / J7 မက်စ / J7 ချုပ် / J7 Pro ကို / J5 ချုပ်
» DESIGN နှင့်စတိုင်
သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုထူးခြားတဲ့ Make နှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအရှိဆုံးနှင့်သီးသန့်ချောနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်ကြည့်ပါ။
for: ရရှိနိုင် OnePlus / Google က Pixel / LG က / Huawei က / Motorola က / Sony က / ကို HTC / ZTE က / Xiaomi က / Asus က / Lenovo က / Oppo / Alcatel / မရှိမဖြစ်ဖုန်း / Vivo / tenor
Tablet များ Customize
» NO MORE Scratch
for: ရရှိနိုင် အိုင်ပက် Pro ကို / iPad ကိုလေတပ် / iPad Mini ကို / Microsoft Surface / Amazon Kindle
ဂိမ်းကစား MODDING »
သင့်ရဲ့အဖွဲ့၏အဆင်းအရောင်နှင့်သင်၏ console နဲ့ controller စစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
for: ရရှိနိုင် PlayStation / Xbox / ကို Nintendo
game consoles ရေခွံ
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သစ်တစ်ခု image ကိုခံစားပါ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အရောင်စာရေးတံနှင့်သင်၏လက်ပ်တော့၏အသွင်အပြင်တိုးတက်စေပါ။
for: ရရှိနိုင် MacBook / MacBook Pro နှင့် / MacBook Air ကို / Mac အတွက် Mini ကို / ကို Magic Mouse ကို / ကို Magic Keyboard ကို / Magic Trackpad / မိုက်ကရိုဆော့ဖ / Razer / HP က / Dell က / Acer က / က Universal Laptop ကို
); Unlimited Creative, 100% GEEK »
ငါတို့သည်လည်းလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အသစ် gadgets အဘို့အရေခွံဖန်တီး: ဝတ်စရာ, action ကိုကင်မရာများ ...
for: ရရှိနိုင် AirPods / Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ / Apple ကတီဗီ / Apple ကခဲတံ / iPod Touch ကို / Apple က Chargers / Beats / GoPro / đi / Samsung ရဲ့ Galaxy ဘူးသီး, ကြိုးမဲ့အားသွင်း, ဂီယာ / အမေဇုံ: Echo / Amazon ကမီးသတ်တီဗီ / Google ကနေအိမ် /့JBL / JUUL / Nacon / Xiaomi က Mi Power ကဘဏ် / Wacom / Universal ရေခွံ
သငျသညျဖြစ်လိုပါလျှင် ထူးခြားတဲ့နှင့်သီးသန့်, GeekColor သင့်ရဲ့ site ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း သာ. ကွီးမွတျ Personalisation စာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး devices များ။
ကျွန်တော်တို့၏ အရေခွံ များမှာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ထုတ်လုပ်သော in စပိန် အကောင်းဆုံးကိုနှင့်အတူ တိများနှင့်ပရီမီယံအရည်အသွေး.
ကာကွယ်သည် စတိုင်နဲ့ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ် သင့်ရဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ နှင့် GeekColor » #BeDIFFERENT
ကျွန်ုပ်တို့၏ INSTA Shopping လည်
ကျနော်တို့တစ်နှစ် 365 ပတ်လုံးသင်တို့မေးခွန်းများကိုဖြေ
ပင်မစာမျက်နှာ ဆက်သွယ်ရန် ရှာရန် InstaShop တင်ပို့ရောင်းချမှု ငွေပေးချေ အာမခံချက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
တို့က Powered - © 2010-2020 GeekColor.com®» #BeDIFFERENT - မူပိုင်
စာမျက်နှာ 1 Sketch နှင့်အတူ Created ။